विश्वकै धनी मस्कको रोजाइमा सिग्नल, ह्वाट्सएपको विरोधमा यस्तो लेखे - Tech News Nepal Tech News Nepal
विश्वकै धनी मस्कको रोजाइमा सिग्नल, ह्वाट्सएपको विरोधमा यस्तो लेखे
काठमाडौं । ह्वाट्सएपले फेसबुकका अन्य ब्राण्डहरुसँग डेटा शेयर गर्ने बताएपछि विश्वकै धनाढ्य व्यक्ति एलन मस्क फेसबुकको विरोधमा उत्रिएका छन् । बिहीबार ह्वाट्सएपले आफ्नो प्राइभेसी पोलिसी अपडेट गर्दै संवेदनशिल डेटा सेयर गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
फेसबुकलाई डेटा सेयर नगरे अब ह्वाट्सएप अकाउन्ट नै डिलिट हुनेhttps://t.co/GOBhbxNpIx
— TechPana (@TechPanaNews) January 6, 2021
उनले ह्वाट्सएपलाई सतहीरुपमा मात्र इन्क्रिप्टेड सर्भिस भनेर प्रचार गरिएको भन्दै त्यसको सट्टा म्यासेजिङ सर्भिस सिग्नल नै प्रयोग गर्न उनले ट्वीटरमार्फत सुझाव दिएका छन् । मस्कको ट्वीटमाथि ट्वीटरका सीईओ ज्याक डोर्सेले पनि रिट्वीट गरेका थिए ।
सिग्नलको पक्षमा मस्कको ट्वीट आएलगत्तै सिग्नलको नयाँ प्रयोगकर्ता संख्या ह्वात्तै बढेको थियो ।
गोपनीयताका लागि फेसबुकविरुद्ध मस्कले धावा बोलेको यो पहिलोपटक होइन । उनले २०१८ मा उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पेज मात्र हटाएनन्, उनले टेस्ला र स्पेसएक्स कम्पनीको पेज समेत हटाएका थिए ।
तर ह्वाट्सएप र सिग्नलविरुद्ध चलिआएको लामो समयदेखिको युद्धमाथि मस्कको हस्तक्षेपकारी धारणा पनि अस्वभाविक भने होइन ।
किनभने इन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ सर्भिस भनेर सुरु गरिएको दुवै सेवामध्ये ह्वाट्सएपले खुल्लारुपमा प्रयोगकर्ताहरुको डेटा संकलन गरी अभिभावक कम्पनी फेसबुकलाई दिन्छ ।
तर सिग्नलले भने डेटा माग गर्ने कुनै पनि संस्था वा कम्पनीको बर्खिलाप उत्रिएको इतिहास छ । साथै यसले प्रयोगकर्तालाई गोप्य राख्ने फिचर पनि थप गरेको छ ।
यसबाहेक इन्क्रिप्सन सेवा त धेरैले दिन्छन् तर सिग्नलले दिने सिग्नल इन्क्रिप्सन प्रोटोकल विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।
आफ्नै प्रयोगकर्ता कति छन् थाहा छैन फेसबुकलाई !
काठमाडौं । फेसबुकका प्रयोगकर्ता कत्ति छन् ? हामीलाई लाग्न सक्छ, अरुलाई थाहा नभए पनि फेसबुकलाई
फेसबुकको नियम तोड्ने प्रयोगकर्ताले अब ग्रुपका पोस्ट देख्न नपाउने
काठमाडौं । आफ्नो कुनै पनि प्लेटफर्मको नियम तोड्ने प्रयोगकर्तालाई फेसबुकले ग्रुपको पोस्ट नदेखाउने भएको छ